उम्मेदवारमा हानथाप : पहाडको राजनैतिक परिवेशमा हलचल हुनसक्ने सम्भावना - खबरम्यागजिन
Homeखबरउम्मेदवारमा हानथाप : पहाडको राजनैतिक परिवेशमा हलचल हुनसक्ने सम्भावना
विनय तामाङहरू अहिले तृणमूल काङ्ग्रेसको दवाबमा रहेको देखापरेको छ। तृणमूल काङ्ग्रेसका प्रमुख ममता व्यानर्जी छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डका विरोधी हुन्। ‘ज्यान जावोस् बङ्गाल विभाजन हुन दिने छैन,’ ममता व्यानर्जीले भन्दै आइरहेकी छन्, ‘पैसा भन पैसा दिन्छु, विकास भन विकास दिन्छु, तर जसले विभाजनको कुरा गर्छ उसलाई म छोड्दिन।’
सिलगढी, 12 मार्च
पहाडको राजनैतिक समाजमा अर्को राजनैतिक हलचल हुने सम्भावना देखा परेको छ। एक गोप्य सुत्रले बताएअनुसार पहाडको चुनावी मौसममा राजनीतिले युटर्न लिनसक्छ। गोजमुमोबाट नै त्यो स्थिति हुनसक्ने बताइएको छ। यद्धपि, यसको निम्ति केही दिन अझ प्रतीक्षा गर्नुपर्ने सुत्रले बताएको छ।
विमल गुरुङ भूमिगत छन्। उनलाई राज्य प्रशासनले सोमोटो मुद्दा लगाएको छ। युएपिए मुद्दा रहेकोले विमल गुरुङले अहिलेसम्म भूमिगतरूपमा नै पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छन्।
विमल गुरुङको अनुपस्थितिको फाइदा उठाएर विनय तामाङले आधिकारिकरूपले घोषणा नगरे पनि व्यावहारिकरूपले मोर्चालाई तृणमूलमा विलय गराइसकेका छन्। गोजमुमो-2 अहिले तृणमूलको बीटिमको रूपमा पहाडमा अस्तित्वमा रहेको गोजमुमो-2 नेता अमरसिंह राई तृणमूलको उम्मेदवार हुनुले नै प्रमाणित गरेको विश्लेषकहरूको दाबी छ।
105 दिनको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन दबाउन मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले विनय तामाङ अनि अनित थापालाई दवाबमा ल्याउन सफल बनेकी थिइन्। विनय र अनित दुवै राजनैतिक भयको कारण सम्झौतामा गएका थिए। यदि, उनीहरू सम्झौतामा नजानु हो भने उनीहरूलाई पनि विमल गुरुङलाई झैं युएपिए मुद्दा लगाउने थियो भन्ने अनुमान विश्लेषकहरूको हो।
त्यही डरले जिटिएमा मनोनित विओएको रूपमा रहेका विनय तामाङहरू अहिले तृणमूल काङ्ग्रेसको दवाबमा रहेको देखापरेको छ। तृणमूल काङ्ग्रेसका प्रमुख ममता व्यानर्जी छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डका विरोधी हुन्। ‘ज्यान जावोस् बङ्गाल विभाजन हुन दिने छैन,’ ममता व्यानर्जीले भन्दै आइरहेकी छन्, ‘पैसा भन पैसा दिन्छु, विकास भन विकास दिन्छु, तर जसले विभाजनको कुरा गर्छ उसलाई म छोड्दिन।’
अघिल्लोपल्ट ममता-विमल नङमासुजस्तो रहे पनि पछिल्लो समय विमल गुरुङ छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दामा अडिग बसे। विमल गुरुङको यस्तो प्रतिबद्धता देखेर डराएका ममता व्यानर्जी सबैभन्दा पहिले पार्टी फुटाउने कुटनीतिमा लागिन्। मोर्चालाई फुटाउन डा. हर्कबहादुर छेत्री व्यानर्जीको लागि गतिलो हतियार साबित भए।
तर यसले पनि मोर्चालाई खास असर गरेन। यसैबिच ममता व्यानर्जीले बङ्गला भाषा पठनपाठनमा अनिवार्य गराउने घोषणा गरेपछि विमल गुरुङले त्यसको विरोध गरे। विमलको विरोध दबाउन पुलिस खन्याएपछि पुलिसले आन्दोलनकारीहरूमाथि गोली बर्सायो। आन्दोलनकारी ममता सरकारको गोलीले ढलेपछि जनताको आक्रोस तीब्र बन्यो।
विस्तारै भाषा थोप्ने कृत्यको विरोधमा सल्किएको आन्दोलन छुट्टै राज्यको मागमा परिणत भयो। विमल गुरुङले भने, ‘आफ्नो राज्य नहुँदा नै यस्तो शोषण पाएका हौं। थोपिएको भाषाको विरोध गर्दा गोली हान्छ भने अब छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड नबनेसम्म आन्दोलन जारी राख्न अनिवार्य छ।’
विमल गुरुङ आन्दोलनमा लागेको मौकामा विनय तामाङ र अनित थापालाई सुरक्षा दिने, जिटिए दिने भएपछि विमल गुरुङको दाहिने हात बनेका विनय तामाङले ममता व्यानर्जीसित सम्झौता गरे। आफ्नैबाट असुरक्षित विमल गुरुङलाई भूमिगत बन्न कर लागेको विमल गुरुङले बारम्बार बताइरहेका हुन्।
भाजपाले विमल गुरुङलाई दिएको बचन पुरा नगरे पनि उनले बारम्बार मुद्दाप्रतिको प्रतिबद्धता जारी गर्दै आइरहेका छन्। अहिले लोकसभा चुनाउको हुरी चलिरहेको छ। यस्तोमा मोर्चा समर्थकहरूले विमल गुरुङमाथि निक्कै आशाले हेरिराखेका छन्। तर यता पहाडमा भने उम्मेदवार बन्न हानथाप देखापर्न थालिसकेको छ।
क्रामाकपाले हतारसाथ आरबी राईको नाम सार्वजनिक गरेको छ। क्रामाकपाले साझा बैठक गरेर साझा उम्मेदवार उठाउन पहल गरे पनि त्यो ‘आरबी राईको लागि गरिएको प्रोजेक्सन’ थिएछ भन्ने कुरा चाल पाउनेहरू आरबी राई र क्रामाकपाको सस्तो कुटनीतिदेखि निराश छन्।
यता आज गोरामुमोले यसपालीको लोकसभा चुनाउमा दार्जीलिङ आसनबाट मुनिष तामाङ वा डा. महेन्द्र पी. लामालाई साझा उम्मेद्वारको खडा भएको हेर्न चाहने बताएको छ।
गोरामुमोले आरबी राईको नाम सोझै नकारेको छ। गोरामुमोका नेता वाई. लामाले राजनैतिक पार्टीबाट होइन, अराजनैतिक व्यक्तित्वलाई मैदानमा खडा गराए उचित हुने बताएका छन्।
उनले क्रामाकपाद्वारा खडा गराइएका आरबी राईको उम्मेद्वारितामाथि पनि अस्वीकृति व्यक्त गरेका छन्।
‘दार्जीलिङ पहाडमा धेरैवटा राजनैतिक पार्टीहरू छन्, जसको आ-आफ्नै नीति र सिद्धान्तहरू छन्। यसैले एउटा पार्टीले खडा गराएको उम्मेद्वारलाई अर्को पार्टीले समर्थन जनाउऩ चाहँदैन वा समर्थन जनाउन हिच्किचाउने गर्छन्,’ वाइ लामाको कुरा यस्तो छ, ‘पार्टी भन्नसाथ सबै पार्टी आ-आफ्नो उम्मेद्वार खडा गर्न मैदानमा आउनेछन्। तर अहिले सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई एकताको सूत्रमा बाँधिने सुनौलो अवसर आएको छ। यसैले सबै राजनैतिक पार्टीहरूले यसपाली आफ्नो पार्टी, झण्डालाई पर सारेर जाति हितको लागि अघि आउनुपर्छ अनि राम्रो उम्मेद्वार खडा गराउऩुपर्छ।’
उनीअनुसार अराजनैतिक व्यक्तिलाई चुनाउको मैदानमा खडा गराइए सबै पार्टीले समर्थन जनाउऩ सक्छन्। उनको भनाईमा मुनिष तामाङ र डा. महेन्द्र पी. लामाको नाम चर्चामा छ।
भाजपाले अहिलेसम्म आफ्नो उम्मेदवारको नाम अघि सारेको छैन। जापका हर्कबहादुर छेत्री पनि उम्मेदवारको लागि निक्कै महत्वाकांक्षी रहेको सुत्रको भनाई छ। गोजमुमो-2 ले आफ्नो उम्मेदवार नदिने भयो। गोजमुमो-2 का विधायक अमरसिंह राई तणमूलबाट उठ्नेछन्।
गोजमुमोका विमल गुरुङ अहिलेसम्म मौन छन्। वाइ लामाको कुरा मान्ने हो भने गोरामुमो राजनैतिक दलबाट उम्मेदवार दिने पक्षमा छैनन्। समय अझ छ, अब दिनदिनै उम्मेदवारको लागि हानथाप बढ्ने सम्भावना छ। अर्कोतिर चुनाउ निकट पहाडको राजनैतिक परिवेशमा अर्को हलचल हुनसक्ने पनि अनुमान पनि धेरैले गरेका छन्।
एलबी राईको वयान भयो सत्य साबित, टिस्टा र रङ्गीत (गोजमुमो-2 र तृणमूल) मिलेर भयो तृणमूल (टिस्टा) : मोर्चा नेता तृणमूलको उम्मेदवार हुने